စိတ်ချမ်းသာအောင် ကူညီပေးသော ကျန်းမာသော အလေ့အကျင့်များ Bezzia
တောရက်စ် | 14/01/2022 14:00 | သက်သာချောင်ချိရေး, ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
အလေ့အထများသည် ပုံမှန်အထပ်ထပ်ပြုသော အပြုအမူများဖြစ်ပြီး စံနှုန်းအတိုင်းမဟုတ်သောကြောင့် သင်ယူရမည့် အပြုအမူများ၊ ၎င်းတို့သည် မွေးရာပါမဟုတ်ပေ။ ထိုအပြုအမူများ သို့မဟုတ် အလေ့အထများသည် အဆိုးမြင်နိုင်သည်၊ သင်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသော ဓလေ့ထုံးစံများ. ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အထတွေ ရှိသလို စိတ်ချမ်းသာအောင်၊ ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းလာစေဖို့၊ ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေ၊ ကောင်းတာတွေ နည်းပါးတာတွေတောင် ကူညီပေးတဲ့ အကျင့်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
အဲဒီအလေ့အထတွေက ကျန်းမာတယ်။ သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်မှုကို ကူညီပေးသော အရာများ သင်၏အကောင်းဆုံးသီလနှင့် သင့်အပြစ်အနာအဆာများဖြင့် သင့်အသားအရေတွင် သင့်ကိုယ်သင် ကောင်းမွန်စွာခံစားပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အထ တွေဟာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကောင်းဆုံးဗားရှင်းကို ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်တာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှုတိုးဖို့ ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းက ဘာလဲ။
1 လုပ်ရပ်တစ်ခုကို အလေ့အထအဖြစ် ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
1.1 ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အထရဲ့ အရေးကြီးဆုံးက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
1.2 အနားယူပါ၊ ကောင်းစွာအိပ်စက်ပါ၊ နာရီလုံလောက်စွာအိပ်ပါ။
1.3 အခြားလူများနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
လုပ်ရပ်တစ်ခုကို အလေ့အထအဖြစ် ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်အောင်၊ အရေးယူဖို့ ၂၁ ရက်ကြာတယ်။. ထိုပန်းတိုင်သို့ ရောက်သောအခါ အလေ့အထကို ရရှိပြီး အလိုလို ပြီးသွားသည်၊ ၎င်းသည် နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သေချာပေါက် အိပ်ရာထ၊ ရေချိုးခန်းသွား၊ ကော်ဖီသောက်၊ ပုံစံအတိုင်း ၀တ်စားပြီး နေ့တိုင်း တူညီတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ထပ်လုပ်မှာ သေချာပါတယ်။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်နေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေပါ။ အချို့သော အလေ့အထများသည် အပျက်သဘောဆောင်သည်၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းမှ တားဆီးပေးသော သို့မဟုတ် သင့်ဘဝ၏ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် တားဆီးပေးသည့်အရာများဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ သင့်အား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးအရ ပိုမိုကျန်းမာစေသည်။ ဒါတွေက တချို့ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အထတွေက သင့်ကို အသက်ရှင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အထရဲ့ အရေးကြီးဆုံးက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အာဟာရဖြစ်စေပြီး ကျန်းမာစေမည့် သဘာဝအစားအစာများဖြင့် ကျန်းမာ၊ ကွဲပြားသော၊ မျှတပြီး အလယ်အလတ်အစားအစာကို လိုက်နာပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သန်မာစေဖို့နဲ့ သင့်အိပ်မက်တွေကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ နေ့တိုင်းထနိုင်စေဖို့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းကို လေ့ကျင့်ပေးပါ။ ဆေးလိပ်၊ အရက်စသည့် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ နှင့် စီမံထားသော ထုတ်ကုန်များ။ ဒါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အတွင်းပိုင်းကနေ ဂရုစိုက်ရမယ့် နည်းလမ်းပါ။
အနားယူပါ၊ ကောင်းစွာအိပ်စက်ပါ၊ နာရီလုံလောက်စွာအိပ်ပါ။
အိပ်ချိန်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်တွေ ပြန်ထွက်လာတယ်၊ သင့်ကြွက်သားများနှင့် အရိုးများသည် နေ့သစ်အတွက် ပြင်ဆင်ပါ။. နေ့ရက်တိုင်းရဲ့ အခြေအနေအားလုံးကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ကို အနားယူဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်လုံလောက်စွာမအိပ်ဘဲ ညဘက်ကောင်းကောင်းမအိပ်ပါက အောင်မြင်ရန် မဖြစ်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စောစောအိပ်ရာဝင်ပါ၊ ညတိုင်း အိပ်ရေးဝဝအိပ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ဖန်တီးပြီး ရှာဖွေလိုက်ပါ။ ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်စက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ.
လူသားသည် သဘာဝအားဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိပြီး ဘဝမျှဝေရန် ဆက်ဆံရေးကို ဖန်တီးရန် လိုအပ်သည်။ လူမှုရေးအခိုက်အတန့်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းခြင်းက စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိစေတယ်။ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆက်ဆံရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ သင့်အားမျှဝေပေးသူများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ရှာဖွေပါ။ ဝါသနာပါရာ၊ စိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် နီးစပ်သူများနှင့် စကားပြောပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝအတိုင်း တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြေအနေတစ်ခုလိုအပ်တဲ့အခါ သင့်ကိုသတိရှိစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ပြဿနာက ဒီအခြေအနေပြီးသွားရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဆက်ရှိနေရင် နာတာရှည်ဖြစ်လာပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုသည် ရောဂါများစွာကို ဖြစ်စေသည်။ထို့ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝအရည်အသွေးကို ခံစားနိုင်ရန် ၎င်းအား ထိန်းချုပ်ရန် သင်ယူရန် အရေးကြီးပါသည်။
Self-image care သည် ပေါ့ပျက်ပျက်နှင့် ရောထွေးနေတတ်သည်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မင်းရဲ့တစ်ကိုယ်ရေပုံသဏ္ဍာန်ကို ဂရုစိုက်တာက တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိဖို့၊ မင်းရဲ့ရုပ်သွင်ပြင်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့၊ နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှု ပိုကောင်းလာဖို့ ပါ၀င်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက မင်းကို ဦးတည်နေတယ်။ ကောင်းသော မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုကို ခံစားပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စိတ်သဘောထားဖြင့် သင့်ဘဝ၏ အခြားရှုထောင့်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဘဝရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကို မြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါ ၊ ဘဝဆိုတာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ပါ လက်ဆောင်တစ်ခုမို့ပါ။ မင်းရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံး "ငါ" နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ အထီးကျန်အခိုက်အတန့်တွေကို ခံစားလိုက်ပါ။ သင့်ဘဝအတွက် ကောင်းသောအရာများ ယူဆောင်လာသူများ၊ ၎င်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေမည့်သူများနှင့် သင့်ကိုယ်သင် ဝန်းရံပေးပါ။ မှန်ကန်စွာစားပါ၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ၊ ရေသောက်ပြီး ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ ဤအရာများသည် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေက သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းပိုကောင်းခံစားရဖို့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေက သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
Built-in ရေချိုးကန်များ၊ သင့်ရေချိုးခန်းအတွက် ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းချက်